अनुगमन Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperअनुगमन Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन यसै साता भारतको भ्रमण गर्ने भएका हुन् । प्रधानमन्त्री जोनसनले शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्नेछन् । भेटका अवसरमा रक्षा र व्यापारलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । कोभिडका कारण अघिल्ला भ्रमणहरू स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा जोन्सनको यो पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि बेलायतले मस्कोमाथिको आफ्नो निर्भरता […]
अहिले मोटरसाइकल तथा स्कुटर अत्यावश्यक सवारी साधन जस्तै भएको छ । काठमाडौं जस्तो सहरमा अत्यधिक ट्राफिक जामका कारण पनि छिटोछरितो यात्राका लागि सर्वसाधारणको रोजाइमा मोटरसाइकल वा स्कुटर पर्ने गरेको छ । तर सबैले नयाँ मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्ने क्षमता राख्दैनन् । यस्तोमा सेकेण्ड ह्याण्ड साधन राम्रो विकल्प हुन सक्छन् । सेकेण्ड ह्याण्ड बाइक तथा […]
गण्डकी कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका बिभिन्न तीन वटा वडाकार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति कास्की र गाउँपालिकाको साझेदारी अन्तर्गत कूल दुई करोड ९ लाख ५४ हजार रुपैयाको लागतमा वडा नं. ३,४ र ५ वडाकार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । गाउँपालिकाका वडा नं. ३ पाहुँदुरमा ६९ लाख ८८ हजार ७४९ रुपैया, […]